Madaxweynaha Puntland oo gaaray Carmo – Radio Daljir
Maarso 30, 2019 5:16 b 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa si diiran galabta loogu soo dhoweeyey degmada Carmo ee gobolka Bari.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa magaalada kusoo dhaweeyey maamulka degmada Carmo, kan gobolka Bari, qaar kamid ah Goleyaasha Dowladda Puntland isimo, dadweyne aad u farabadan oo isugu soo baxay barxadda weyn ee Carmo, waxaana uu Madaxweynaha Puntland uga Mahadceliyey shacabka reer Carmo soo dhoweynta balaadhan ee ay ku qaabileen isaga iyo weftigiisa.
“Runtii maanta waa maalin taariikhiya, waa maalin farxad aad u weyn, waa maalin aan malaynaayey inaan tanoo kale arko soo dhoweynta balaadhan ee magaalada Carmo u samaysay aniga iyo weftigayga, waxay muujinaysaa dowladnimo jacayl, waxay muujinaysaa diyaar garawga in dawladdani hore u dhaqaaqdo, waxay muujinaysaa doonista dadka reer Carmo ee dowladdoodu inay taabagasho iyo sidii looga bixilahaa habacsanaanta dhacday”.
“Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida meelkastay joogaan, siday marwalba ugu heelan yihiin inay nabadda iyo xasiloonida ka shaqeeyaan, socdaalkayagii Garoowe illaa iyo Carmo waxaa muuqanaysey inay hadh iyo habeen meel walba ka hawlgelayeen, iyadoo aynu ognahay duruurfta adag ee ay ku shaqaynayaan, waxaan balan qaadayaa in dowladda ahmiyaddeeda koowaad, labaad iyo sadexaadba noqondoonto daryeelka ciidamada, sugidda amniga iyo horumarinta bulshada” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa shacabka reer Carmo ka balanqaaday in dowladdu ka qayb qaadanayso horumarinta degmadooda, isagoona Madaxweynuhu cadeeyey in dib loo furidoono akademiyadda Booliska Soomaaliyeed ee Carmo.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay Carmo oo ah goob taariikhiya oo Soomaali oo dhan kulmisay oo akademiyadda Booliska Soomaliyeed ay ku taalo inaan galabta nimaadno, waxbadan ayaa laga filayaa shacabka reer Carmo oo ay kamid tahay ka qayb qaadashada sugidda amniga, waxaan rajaynaynaa mar-dhow in kuliyadda Carmo shaqadeedii bilaabi doonto soonasaari doonto geesiyaal iyo halyeeyo ku biira geesiyaasha ka shaqeeya sugidda amniga dalka”.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in Puntland tan iyo intii la aas-aasay aanay jirin cadaw ka guulaystey, haddana diyaar looyahay cidhibtirka kooxaha nabaddiidka ah ee cadawga ummadda Soomaaliyeed.
“Puntland tan iyo intii la unkay majirto cid ka guulaysatey, ciday ka aqbaleen ma jirto dullinimo ma qaadan, haddana ma qaadan doonaan Insha Allah” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ay wehelinayaan qaar kamid ah goleyaasha Dowladda iyo maamulka gobolka Bari ayaa xadhiga ka jaray xarun dalxiis oo lagu magacaabo Cosob oo laga hirgaliyey Carmo.